के तपाइँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी १० कुरा बायोडाटामा नछुटाउनुस् ~ Khabardari.com
के तपाइँ जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यी १० कुरा बायोडाटामा नछुटाउनुस्
के तापाई जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाइले आफ्नो बायोडाटामा सम्पूर्ण कुराहरुलाई समाबेश गर्न नाछुटटाउनुहोस । हुन त तपाइँको बायोडाटा विवरणले मात्रा तपाइँलाई राम्रो जागिर मिल्दैन पक्का पनि हुँदैन ।
तर बायोडाटा नभई पनि जागिर पाइदैन । त्यसैले याद राख्नुस् राम्रो बायोडाटा विवरणले कम्तिमा तपाइँलाई अन्तर्वार्ताको लिष्टमा सजिलै पर्ने सम्भावना हुन्छ । तपाइँले इच्छाएको जागिर खान बायोडाटामा समाबेश गर्नुपर्ने पर्ने १० कुराहरु यसप्रकार छन् ।
१ तपाइँले आफू कति धेरै इमान्दार छु भन्ने कुरा देखाउन बायोडाटामा विवरण कहिल्यै पनि समाबेश नगर्नुस । त्यसो गर्नुको सट्टा तपाइँले गरेका हरेक काम र उपलब्धिलाई हाइलाइट गरी ४ देखि ६ बुँदामा लेख्नुस् ।
२ प्रविधिको तिब्र बिकाशसंगै बर्तमान परिबेशमा बायोडाटा अनलाइन फर्मकोरुपमा पनि भर्ने चलन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले चलनचल्तीमा रहेका पदावलीहरुलाई आफ्नो बायोडाटामा समावेस गर्न कहिल्यैपनि नभुल्नुहोस् ।
३ आफूले कति धेरै ठाउँमा जागिर खाएँ भन्ने कुराको बायोडाटामा ब्याख्या गर्नुभन्दा पनि एकै ठाउँमा कति धेरै वर्ष जागिर खाएँ भन्ने कुरामा जोड दिनुहोस ।
४ यदि तपाइको अनुभव निक्कै लामो छ भने त्यसलाई बायोडाटामा सारांस नबनाउनुस् किनकि त्यस्तो कुराको बायोडाटामा मान्यता दिदैन । त्यसैले भूमिका र अनुभवलाई मात्र हाइलाइट गर्नुहोस् ।
५ भनिन्छ तपाइँको बायोडाटाको माथिल्लो भाग पढेर नै अन्तवार्तामा बोलाउने नबोलाउने निर्णय गरिन्छ । त्यसैले तपाइँको क्षमता र अनुभवलाई सबैभन्दा माथि लेख्नुस् । तपाइँको इमेल वा मोबाइल नम्बर पुछारमा मात्र लेख्नुस् ।
६ बायोडाटामा सके सम्म छोँटा वाक्यको प्रयोग गर्नुस ।
७ तपाइको बायोडाटालाई विभिन्न चरणमा बाँढ्नुस् । उदहारणको लागि कामको अनुभव, अवार्ड, वा अन्य ।
८ सके सम्म बायोडाटामा लेखिएको भाषामा फन्ट धेरै ठूलो वा सानो नगराउनुस् । १० वा १२ को फन्ट प्रयोग गर्नुस् ।
९ बायोडाटँमा तस्विर ग्राफिक्स जस्ता लेआउट प्रयोग भुलेर पनि नगर्नुस् ।
१० स्तरीय बायोडाटामा कुनै पनि एक कुरलाई दोहोर्‍याएर समाबेश गरिएको हुँदैन । त्यसैले बायोडाटा बनाउँदा साथीभाइलाई देखाएर पुनर्लेखन गर्न नभुल्नुस ।